Lahatsoratra nataon'i Chloe Smith momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Chloe Smith
Inona no ifantohanao voalohany amin'ny maha orinasa SaaS anao? Ny fitomboana, mazava ho azy. Ny fahombiazan'ny Skyrocketing dia andrasana aminao. Zava-dehibe amin'ny fahavelomanao mandritra ny fotoana maharitra: na dia mitombo amin'ny 60% isan-taona aza ny orinasan-tsolika dia tsy tsara lavitra noho ny 50/50 ny mety ho lasa goavambe an-tapitrisany dolara. McKinsey & Company, Grow Fast or Die Slow Month isam-bolana Ilaina ny fitomboana mba handrakofana ny fatiantoka avy amin'ny orinasa churn SaaS izay mazàna amin'ny ankapobeny. Mandresy ny fanantenana ary
Fomba 6 hanatsaran'ny famantarana sosialy ny filaharana
Alatsinainy Desambra 17, 2018 Alarobia, Desambra 19, 2018 Chloe Smith
Ny fambara sosialy dia maneho fifandraisana, toy ny retweet, tiany ary ny vaton'ny mpampiasa media sosialy miaraka amin'ny marikao, izay manondro ny lazany sy ny kalitaon'ny motera fikarohana. Google, Bing, Yahoo, ary motera fikarohana hafa dia mampiasa algorithman sasany hamaritana ny laharan'ny valin'ny fikarohana. Ny tena fiantraikan'ny famantarana ara-tsosialy amin'ny valin'ny algorithma dia vinan'ny olona, ​​satria ny algorithman'ny motera fikarohana dia voaro amin'ny alàlan'ny fifanarahana tsy fampahafantarana. Na izany aza, ny media sosialy dia tsy isalasalana fa